နေရောင်ခြည်တော်အောက်တွင် ဆုတောင်းခြင်း - ကျန်းမာပျော်ရွှင်သောဘဝအတွက် ဗောဓိ တရားအားထုတ်ခြင်း
အများပြည်သူရှေ့တွင် စကားပြောဆိုရန် ကြောက်ရွံ့မှုကို ဘယ်လို ကျော်ဖြတ်မလဲ
ကျွန်ုပ်နှင့်အတူ လေ့လာသင်ယူနေကြသည့် လူများစွာတို့သည် ဓမ္မ သင်ကြားရန် ဆက်လုပ်ပါသည်။ သို့သော်၊ ကနဦးပိုင်းတွင် ၎င်းတို့သည် စတိတ်စင်မြင့် စိုးရိမ်မှုကြောင့် ဖြစ်ကြပါသည်။ သူတို့က ကျွန်ုပ်ကို မေးကြပါသည် : “ဆရာတော်ဘုရား၊ တပည့်တော်က လူရှေ့သူရှေ့ စကားပြောရမှာ တကယ်ကြောက်တယ် ဘုရာ့။ ကြောက်ရွံ့မှုမှ မည်သို့ ကျော်လွှားရမည်ဆိုသည့်အရေး မိန့်ကြားပေးပါဘုရား။ နည်းတစ်မျိုး၌ ဖော်ပြ ထားသည်တွင် ဆရာတစ်ဦးသည် ၎င်းအနေဖြင့် ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ ကျောင်းသား/သူများသည် ဘာသာရပ်များကဲ့သို့ ပြုမူသင့်ကြောင်း အကြံပြုထားပါသည်။ .
လာရောက်သူ ပရိသတ်များသည် ကျွန်ုပ်၏ မိသားစုဖြစ်သည်
၎င်း၏စိတ်ကူးအကြံဉာဏ်သည် ၎င်းကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်မှုသာလျှင် တင်ထားပါသည်။ “ဒါက ဆရာတော် ထင်သလို မဟုတ်ဘူးဘုရာ့” ဟု ၎င်းက အကြောင်းပြန်ခဲ့သည်။ မဟုတ်ဘူး၊ ဒါမဟုတ်ဘူး။ လာရောက်သူ ပရိ သတ်များသည် ကျွန်ုပ်၏ မိသားစုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့မှာ ကျွန်ုပ်၏ အဖေ၊ အမေ၊ အဒေါ်၊ ဦးလေး၊ အစ်ကိုနှင့် အစ်မများ ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့ နာမကျန်းဖြစ် နာကျင်နေကြရပါသည်၊ ထို့ကြောင့် မည်သည့်အတွက် မကူ ညီနိုင်တာလဲ။ ?
ဝေနေယျ သတ္တဝါအားလုံးတို့သည် ကျွန်ုပ်၏ ဗုဒ္ဓဖြစ်သည်
“ကျွန်ုပ်၏ ကိုယ်၊ ဝစီနှင့် စိတ်တို့ကို ဗုဒ္ဓဘုရားထံသို့ ရည်စူးရန်။” ယခုအခါ သင့်ကို ပြောခွင့်ပြုပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်၊ ဝစီနှင့် စိတ်တို့ကို ဗုဒ္ဓဘုရားထံသို့ ရည်စူးထားပါသည်။ သို့သော် အားလုံးသော ဝေနေယျ သတ္တဝါများ သည် ကျွန်ုပ်၏ ဗုဒ္ဓဘုရားများ ဖြစ်ကြသည်ဟု သဘောပေါက်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ကိုယ်၊ ဝစီနှင့် စိတ်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ရင်းနှီးမှု မျှဝေသူအားလုံးသို့ ရည်စူးဖော်ပြလိုပါသည်။ .
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ငြိမ်းချမ်းစေရန် ဆုတောင်းပါသည်
မနက်ခင်းတိုင်းတွင် အရှေ့အရပ်မှ နေမင်းကြီး ထွက်ပေါ်လာမှုကိုမြင်တွေ့ရသည့်အတွက် ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် ငြိမ်းချမ်းစေရန် ဆုတောင်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ဤနေရာတွင် ကဗျာတစ်ပုဒ်ရေးရန် ကြိုးပမ်းနေခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ နှလုံးအိမ်တွင် ယင်းကဲ့သို့ အမှန်စင်စစ် ဆုတောင်းပါသည်။ နေမင်းရောင်ဝါ ကျရောက်သည့် အရပ်တိုင်း ဘဝ ငြိမ်းချမ်းလှပမည်ဟု ဆုတောင်းပါသည်။ နာကျင်မှုမရှိ၊ ဆာလောင် ငတ်မွတ်မှုမရှိ၊ စစ်ပွဲမရှိ၊ လှည့်စားမှုမရှိပါ။ .
တည်ရှိနေသည့် အရာခပ်သိမ်း အကောင်းဆုံးရှိစေရန် ဆုတောင်းပါသည်
နေရောင်ခြည် အလင်းသည် အားလုံး၏ ဘဝအပေါ်ဖြန့်ကျပြီး ၎င်းတို့အတွက် ပျော်ရွှင်မှု ယူဆောင်လာပါစေ သား။ အနာရောဂါများ ကင်းဝေးကြပါစေ၊ လူသားများ အပြုံးပန်းဝေနိုင်ပါစေ။ နာကျင်မှု ကင်းဝေးကြပါစေ၊ လူသားများ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်မှုရှိနိုင်ပါစေ။ ၎င်းတို့သည် ကြောက်ရွံ့မှု ကင်းဝေးကြမည်ဖြစ်သည်။ နံနက်ခင်း တိုင်းတွင် ကျွန်ုပ် ကျင့်ကြံသည့်အတိုင်း၊ နေမင်းအား ကျွန်ုပ် ကြိုဆိုသည့်အတိုင်း တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်လာ နေသည့်အခါ ဤမေတ္တာ ကရုဏာတော် ဆုတောင်းသည် နေရောင်ဝါနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်နှလုံးသားသည်းပွတ်မှ ပေါ်ထွက်လာပါသည်။ ကမ္ဘာမြေတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆုတောင်းအပြင်တောင်တန်းများ၊မြစ်ချောင်းများ၊ သစ်ပင်နှင့် မက်၊ အပင်များနှင့် ပိုမွှားများ စသော အရာခပ်သိမ်းတို့အတွက် အကောင်းဆုံး ဆုတောင်းပါသည်။ .
ပင့်ကူမျှင် ကွန်ယက်မွှေးများကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ထားသည် : သင့်ဘဝ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကို ရဲစွမ်းသတ္တိတို့ဖြင့် ရင်ဆိုင်ပါ။ .
ကွန်ုပ်တို့သည် ဤမှန်ကန်သည့် ကရုဏာစိတ်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံးနှင့် ဝိညာဉ်၊ ဤကမ္ဘာတွင်းမှ အရာ ခပ်သိမ်း တို့နှင့်အတူ ပေါင်းစပ်ပါသည်။ ဤအရာကို မှန်ကန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သူသည် ကရုဏာ မေတ္တာဖြစ်ပါသည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်သည် တစ်ဦးစီတိုင်းအတွက် အကောင်းဆုံးသော တောင်းဆုများပြုပေးပါသည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ကျွန်ုပ်နှင့်အတူ ဗုဒ္ဓဓမ္မ လေ့လာသင်ကြားနေသူ၊ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူ တရားပွားများ ကျင့်ကြံလေ့လာ ပျော်မွေ့နေသူများ တစ်ဦးစီတိုင်းအတွက် ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံးသားများကို ပင့်ကူမျှင် ကွန်ယက် မွှေးကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်နေရန် ဆုတောင်းပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပင့်ကူမျှင်ကဲ့သို့ ဆက်သွယ်ရေး ချန်နယ်လိုင်း ဖွင့်ထားပါသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ ဝမ်းမြောက်မှု၊ စွမ်းအင် နှင့် အကောင်းဆုံး ဆုတောင်းများ ပေးပို့နိုင်စေရန်၊ ဤစွမ်းအင်အားလုံးကို လက်ခံရရှိနိုင်စေရန်၊ သင့်ဘဝ နေ့ရက်တိုင်းကို ရဲစွမ်းသတ္တိရှိမှုဖြင့် အားလုံး ရင်ဆိုင်သွားနိုင်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။ .
Next：နီပေါငလျင်အတွက်သက်သာစေကြောင်းနှင့် ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေကြောင်း အားထုတ်မှု- မျှော်လင့်ချက်အတွက်၊ မေတ္တာတရားနှင့်အတူ